Welcome to Aayaha Nolosha » HAWEENEY XAAS AHAYD OO XALAY MUQDISHO ISKU DISHAY
HAWEENEY XAAS AHAYD OO XALAY MUQDISHO ISKU DISHAY
April 14, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Habeenkii xalay ayaa waxaa degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho isku dishay Haweeney xaas ahayd oo magaceeda lagu sheegay Xaawo Cali Maxamed.
Ehelkeeda ayaa warbaahinta u sheegay in gurigii ay deganeyd ay isku soo xirtay kadibna ay Xarig u isticmaashay dilkeeda.
Mahad Cabdulle Macow Maxamed oo ay Ilmo Adeer yihiin Haweeneyda is dishay ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka ay isku dishay Walaashiis isagoo xusay iney qabtay xanuunada ku dhaca maskaxda.
“Guriga anigoo ka maqan ayaa la i soo wacay oo la ii sheegay in walaashey ay is dishay, qolkeeda ayay dhexda ka soo xiratay kadibna xarig ayay isku daldashay xiligaas Ninkeeda shaqo ayuu ku maqnaa aniga ayaa u imid oo xarigii ayaan ka furay, waxaana aaminsanahay in xanuunkii maskaxda ka haayey sanadkii u dambeeyey uu ku soo darsaday” ayuu yiri Mahad.
Sidoo kale waxa uu sheegay in aysan jirin wax dhibaato ah oo ay u geysatay carruurteeda oo ah laba Wiil ah isla markaana meydkeeda ay geeyeen Xarunta dembi-baariista ee CID-da oo uu ku amray taliyaha Saldhiga degmada Yaaqshiid.
Falka ay isku daldalshay haweeneysan ayaa waxaa ka naxay eheladeeda iyo dadka qoyskaas deriska la ahaa oo caawa buux-dhaafiyey gurigeeda, marka laga tago hadalka walaalkeedna lama oga sababta dhabta ah ee ay haweeneysan ku xambaartay iney nafta is dhaafiso.